Teboka marobe no mila fifantohana amin'ny fananganana rihana PVC ririnina - ZD manam-pahaizana zoro
Home > Teboka marobe no mila fifantohana amin'ny fananganana rihana PVC ririnina
Ahitsio: Denny　2019-12-19　Mobile
Diniho aloha ny mari-pana any amin'ny toerana misy ny fananganana.Raha ambany kokoa noho ny 10 ° C, tsy misy asa azo atao, 12 ora mialoha sy aorian'ny fananganana, ny fepetra ilaina amin'izany dia azo atao ny hitazomana ny mari-pana ao anatiny mihoatra ny 10 ° C; fa ny mari-pana dia tsy maintsy atao ambany noho ny 28 ° C. Ny simenitra miaro tena dia tokony hojerena amin'ny tanjaka arakaraka ny takian'ny fananganana rehefa sitrana tanteraka.
1. Raha mando ny tany dia mety miteraka tsy ampy fatran'ny simenitra ny simenitra; mba hahitana raha efa maina tanteraka ny fetran'ny simenitra, ny takelon'ny hamandoana dia takiana ho latsaky ny 4,5%.
2. Ny mari-pana ambany dia mety hiteraka ny tanjaky ny simenitra manangana ny tena mba hihena.
3. Noho ny mari-pana ambany, dia mety hisy fiantraikany ny famantarana ara-batana na simika ny adhesive.
4. Ny mari-pana akaikin'ny fidirana, ny varavarana, na ny varavarankely dia ambany .. Alohan'ny fananganana, fantaro aloha raha notanterahina ny fepetra ilaina amin'ny mari-pana farany ambany indrindra amin'ny fenitry ny fananganana, ary andramo ny hisorohana ny fananganana gorodona vita amin'ny plastika eny amin'ny fototra amin'ny alàlan'ny fepetra faran'izay famonoana hafanana.
5. Ny mari-pana ambany dia mety hampahasarotra ny manaraka ny gorodona plastika sy ny adhesive. Noho ny fitarihan'ny mari-pana, ny fahatsaran'ny fanasitranana ny adhesive dia miadana.
6. Noho ny hafanana anatiny, ny gorodona plastika dia mety ho mafy orina sy mihena amin'ny ambaratonga samihafa.
7. Ny fiheverana manokana dia tokony hojerena amin'ny vanim-potoana hafanana ambany, ary ireto fepetra manaraka ireto dia tokony hatao mba hialana amin'ny vokatry ny fanamboarana ratsy.
8. Na dia aorian'ny fanamboarana ny gorodona vita amin'ny plastika aza dia hamafisina sy hihalefaka ny gorodona vita amin'ny plastika noho ny tsy fitovian'ny hafanana eo anelanelan'ny andro sy ny alina na ny hafainganana fahasamihafana.
9. Noho ny fitarihan'ny mari-pana, ny fahatsapana fanasitranana ny adhesive dia miadana; mba hisorohana ny gorodona plastika sy ny adhesive tsy hikorontana aorian'ny fananganana dia tsy maintsy averimberina matetika miaraka amin'ny tsindry fanerena izany mba hametahana tanteraka.
10. Tehirizo ny gorodona vita amin'ny plastika sy plastika any amin'ny toeram-panamboarana miaraka amin'ny mari-pana amin'ny fananganana alohan'ny fananganana; raha toa ka coil PVC (manana ny fepetra ny tranokala), sokafy ny fantsona araka izay azo atao mba hamerenanao ny gorodona PVC.
11. Ny fotoam-panala amin'ny ririnina dia eo amin'ny 2-3 eo ho eo mihoatra ny fahavaratra; tokony ho voatahiry mandritra ny 3-4 herinandro farafahakeliny ny fotoana fanamainana.
Ny fananganana ririnina dia tsy maintsy manaraka ny fepetra takian'ny ririnina PVC amin'ny ririnina amin'ny fananganana gorodona, mba hahafahan'ireo asa fanamboarana mialoha ny hiantohana ny kalitao.
Teboka marobe no mila fifantohana amin'ny fananganana rihana PVC ririnina Ny atiny mifandraika